रसियाले बनाएको खाेप भोलि दर्ता हुने, कत्तिको प्रभावकारी ? रसियाले बनाएको खाेप भोलि दर्ता हुने, कत्तिको प्रभावकारी ?
रसियाले बनाएको खाेप भोलि दर्ता हुने, कत्तिको प्रभावकारी ?
प्रकाशकराष्ट्रिय टाईम्स — 8/11/2020 02:37:00 pm 0
एजेन्सी, श्रावण २७, मङ्गलबार
कोरोनाभाइरस महामारीबाट मानिसहरूलाई बचाउन खोप खोज्ने दौडमा, विश्वभरि विभिन्न कम्पनीहरु मानव परीक्षणको तेश्रो चरणमा छन्। रसियाबाट भर्खरका रिपोर्टहरूले दावी गरे अनुसार तिनीहरूका एकजना उम्मेद्वारले मानव क्लिनिकल परीक्षणको सबै तीन चरणहरू सफलतापूर्वक पूरा गरेका छन्। कथित रूपमा रसियाले खोप उत्पादन गर्न सुरु गर्नेछ र देशव्यापी खोप अभियानका लागि योजना बनाइसकेको छ।
रसियामा हाल दुईवटा खोप बनाउने कम्पनी छन् - एउटा, भियोटेक्नोलजीको भेक्टर स्टेट रिसर्च सेन्टरले विकसित गरेको खोप, दोस्रो रसिल रक्षा मन्त्रालयको साथसाथ गम्लेया वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थान एपिडेमियोलोजी र माइक्रोबायोलोजीद्वारा निर्मित खोप हो।
एजेन्सीका अनुसार, गम्लेया वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थान बाट खोप उम्मेदवार को मानव परीक्षण अब पूरा भएको छ। भ्याक्सिन रेजिष्टर गर्ने प्रक्रिया १० देखि १२ अगस्ट सम्म सुरू हुनेछ। त्यसपछि खोप पंजीकरणको तीन देखि सात दिन भित्र उपलब्ध गराइनेछ ।
यस्तै उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान केन्द्र र उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा मानव कल्याण सम्बन्धी संघिय सेवाको बायोटेक्नोलोजीद्वारा निर्मित इपिवाक कोरोना खोपले भर्खरै घोषणा गरे अनुसार उनीहरूले खोपको व्यापक उत्पादन नोभेम्बरमा सुरु गर्नेछन् ।
तर रसियाले यस खोप परीक्षणबाट कुनै निष्कर्ष प्रकाशित गरेको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले विभिन्न कविड-१९ उम्मेद्वारहरूलाई ट्र्याक गरिरहेको छ र खोपको बारेमा मानव परीक्षणको तीनै चरणहरूलाई पार गरेको कुनै उल्लेख गरिएको छैन । स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिन्तित छन् कि रूसले कुनाहरू काटिरहेको छ र छिटो ट्र्याकिंग प्रक्रियाले जनतालाई जोखिममा पार्छ। डब्ल्यूएचओले पनि रूस लाई 'सुरक्षित र प्रभावकारी खोप' उत्पादन गर्नका लागि निर्देशनहरू अनुसरण गर्न आग्रह गरेको छ।
लेबल : विदेश विशेष शिक्षा र स्वास्थ्य